AFRICOM : Khatarta Amni ee Hadda Jirta Ma Ahan Shabaab ee Waa Mudda Kordhinta – Goobjoog News
Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa gudddiga senete-ka ee arrimaha amniga warbixin ka siiyay xaaladda Amni ee Soomaaliya ayaa shegay in Soomaaliya ay ka taagan tahay xaalad Hubanti la’aan amni oo ka qatar ururka Al-shabaab.
Taliyaha Africom Stephen Townsend oo Guddiga Senate-ka Arrimaha Ammaanka la hadlay ayaa sheegay indhibaatooyinka iyo Isfaham waaga ka dhex jira madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad gobaleedyada ay tahay khatarta ugu daran ee hadda Jirta.
“Saameynta ugu weyn ee amniga Soomaaliya haatan ma aha Al-Shabaab, ee waa xasaradda siyaasadeed ee ka dhex taagan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad-goboleedyada.
“Muddo krorosiga ka baxsan mudda xileedka dastuuriga ah ee xilka madaxweynaha — ayaa ah caqabaddeenna ugu weyn, sida aan filayo, hadda,” ayuu yiri Jeneraal Townsend.
12-kii bishaan Golaha Shacabka ayaa Laba sano ugu daray Farmaajo taas oo ay ka dhalatay diidmooyin fara badan
Mr Townsend oo mudanayaasha guddiga ay Su’aallo kale ka weydiiyeen xaaladda Amniga Soomaaliya ayaa sheegay in go’aankii Madaxweeynihii hore ee Mareykanka Trump ciidamada uga saaray Soomaaliya ay ka dhex abuurtay qal qal iyo in ay Al-shabaab ka faa’ideystaan .
“Lama dafiri karo in ka saaridda ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay abuurtay jahwareer iyo khatar hor leh,” ayuu yiri Townsend .
Stephen Townsend ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin Ciidama yar oo Mareykanka , kuwaasne ay la shaqeeyan Safaaradda.
Taliska AFRICOM ayaa intii uu ku sugnaa Soomaaliya waxa uu Tababaro siiyay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya , iyadoo sidoo kale AFRCIOM ay aas aastey Ciidamada Kumaandoosta DANAB, kuwaas oo hadda gaaraya 3,000 Askari .
Mareykanka ayaa sido kale intii uu ku sugnaa Soomaaliya waxa uu sameeyay howl-galo iyo duqeymo dhanka cirka ah oo lagu dilay Saraakiil Badan oo ka Tirsan Al-shabaab .